आईफोनको साथ खराब बानी आईफोन समाचार
आईफोनको साथ खराब बानी
यदि तपाईं आफ्नो आईफोनको प्रेमी हुनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई राख्न चाहनुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो सम्भव छ र अधिकतम समय सम्भव छ। अन्य अवसरहरूमा हामीले अनुप्रयोगहरूको उपयोगलाई अनुकूलित गर्ने वा ब्याट्री प्रदर्शन सुधार गर्ने फाइदाहरूबारे छलफल गरेका छौं।
आज हामी आक्रमण गर्नेछौं अधिक मानवीय प्रयोग फोनमा र हामी के गर्छौं र किन गर्ने छैनौं।
1 यसलाई कहिले पनि बन्द नगर्नुहोस्
2 वाईफाई र ब्लुटुथ सबै समय सक्रिय छ
3 चरम तापक्रमको साथ बाहिर यो प्रयोग गर्नुहोस्
4 राति प्लग राख्नुहोस्
5 एक गैर-एप्पल चार्जर प्रयोग गर्नुहोस्
6 यसलाई सफा नगर्नुहोस्
7 पासवर्डले यसलाई सुरक्षा नदिनुहोस्
8 आईफोन हातमा हिंड्दै
यसलाई कहिले पनि बन्द नगर्नुहोस्
समय समयमा फोन बन्द गर्न सल्लाह दिइन्छ, वा ब्याट्री यसभन्दा पहिले चाँडो मर्नेछ, किनकि र स्थिर छ भने यसले ब्याट्रीमा लगातार तानिरहन्छ। विज्ञहरु सिफारिस गर्छन् ब्याट्री निकाल्नुहोस् समय-समय, केही घण्टा बितिसकेपछि लोडसँग अगाडि न बढ्नुहोस्, र यसरी पुनःस्टार्ट प्रणाली पूरा हुन्छ। अर्को विकल्प यो छोड्नु हो केही घण्टा को लागी बन्द दिन वा रातको समयमा, जब यो तपाइँलाई कम आघातिक हुन्छ।
यदि तपाईंको औचित्य हो कि तपाईं यसलाई अलार्म घडीको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो याद राख्नुहोस् कि तपाईंसँग अर्को छ सस्तो विकल्प जस्तै तपाईको कलाई वा घडी लगाउनुस् वा मानक अलार्म घडी।
वाईफाई र ब्लुटुथ सबै समय सक्रिय छ
जब आईफोन दुबै वाइफाइ र ब्लुटुथ सक्षम छ र तपाईं एक वा दुवै प्रयोग गरिरहनु भएको छैन भने, यो शुद्ध हो ब्याट्री फोहोर। सक्रियतालाई सीमाहरूमा राख्नका लागि सल्लाह दिइन्छ जब तिनीहरू वास्तवमै आवश्यक हुन्छन्, विशेष गरी बीटी, जुन सामान्य छैन वा यस संसाधनको निरन्तर प्रयोग छैन।
चरम तापक्रमको साथ बाहिर यो प्रयोग गर्नुहोस्
«आईओएस उपकरणहरू ती ठाउँहरूमा प्रयोग गर्नुहोस् जहाँ तापक्रम ० र º0डिग्री सेल्सियसको बीचमा हुन्छ। उच्च वा कम तापक्रमले अस्थायी रूपमा ब्याट्री जीवन छोटो बनाउन सक्छ वा उपकरणको तापमान नियमन व्यवहारमा परिवर्तनको कारण।। "
यस अवस्थामा, ब्याट्री खत्तम हुन सक्छ, स्क्रिन मधुरो हुन सक्छ, वा फोन अस्थायी रूपमा बन्द हुन सक्छ। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि आपतकालिन कलहरू सक्रिय हुन जारी रहनेछ उपकरण खोल्न सक्नुहुन्छ। आईफोन राख्नु महत्वपूर्ण छ तत्वबाट टाढा यी चरम अवस्थामा।
राति प्लग राख्नुहोस्
तपाईं सुत्नुहुँदा आईफोन चार्ज छोड्नु सुविधाजनक हुन सक्छ, तर यो राम्रो विचार होईन। आईफोन प्लग इन छोड्नुहोस् यो पूर्ण चार्ज भए पछि यसले लामो अवधिमा ब्याट्री बिगार्न सक्छ। दिनभर चार्ज गर्न कोशिस गर्नुहोस् ताकि तपाईं यसलाई अनप्लग गर्न सक्नुहुनेछ एकचोटि एकपटक चार्ज भएपछि, वा इलेक्ट्रिकल आउटलेट प्रयोग गर्नुहोस् टाइमर र यसैले यो आफैंमा बाहिर जान्छ।
एक गैर-एप्पल चार्जर प्रयोग गर्नुहोस्
एप्पल चार्जर महँगो छन्, तर तिनीहरू लगानीको लागि योग्य छन्। तेस्रो-पार्टी चार्जरहरू प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएको हो आईफोनका साथ ठूला समस्याहरू to भन्दा पहिले, जसमा आगो र विस्फोटहरू पत्ता लागेको छ। यसलाई रोक्नको लागि, एप्पलले केबलहरू र चार्जरहरूको लागि प्रतिस्थापन कार्यक्रम सिर्जना गर्‍यो, र पछि मूलसँग तिनीहरूको प्रतिस्थापनको लागि छुट।
यसलाई रोक्नको लागि, नयाँ बिजुलीको तार निर्माता जानकारी प्रदान गर्दछ, र यदि यो एप्पल द्वारा अनुमोदित छैन, यसले उपकरण चार्ज गर्दैन।
यसलाई सफा नगर्नुहोस्
तपाईको आईफोन जीवाणुहरूको समूह हो, तपाईले यो टेबुलमा राख्नुहुन्छ, यसलाई फोहोर हातले छुनुहुन्छ, तपाईंले यसलाई जेबमा वा पर्समा बोक्नुहुन्छ र अन्य थुप्रै कीटाणुहरूको साथ लिनुहुन्छ। यो वास्तवमा घिनलाग्दो हुन सक्छ यदि तपाईं यसलाई एक माइक्रोस्कोप मुनि हेर्नुहोस् वा यी विषयहरूमा अलि संवेदनशील हुनुहुन्छ। एप्पल सुझाव दिन्छ कि तपाईले useएक नरम, चुरोट-मुक्त कपडा"को लागी यसलाई नियमित तवरले सफा गर्नुहोस्। त्यहाँ उत्पादनहरू पनि छन् जुन फोनलाई जीवाणुनाशक गर्न यूवी लाइट्स प्रयोग गर्दछ, तर म तिनीहरूको संचालकतामा शंका गर्दछु।
पासवर्डले यसलाई सुरक्षा नदिनुहोस्
एप्पलका अनुसार आईफोनका आधा प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोनलाई पासवर्डको साथ लक गर्दैन। यदि तपाईंसँग तपाईंको आईफोन पहुँच गर्न पासकोड सक्रिय गरिएको छैन र यो चोरी भएको छ भने, तपाईंको पहिचान र व्यक्तिगत जानकारी रहन्छ पूर्ण रूपमा खुला। यो तपाइँको गोपनीयता सुरक्षित गर्न को लागी एक सजिलो तरीका हो।
याद गर्नुहोस् कि हामीले भर्खर एक भिडियो प्रकाशित गरेका थियौं, थपको सुरक्षा पनि आईक्लाउड सजिलै असक्षम पारिन्छ, के संग पनि तपाईं टर्मिनल दिँदै हुनुहुन्छ.
आईफोन हातमा हिंड्दै
यसलाई बार टेबलमा छोड्नुहोस्, स्टोरमा काउन्टरमा राख्नुहोस्…। यी सबै इशाराहरू चोरहरूलाई चिच्याउँदै छन्, किनकी तपाईंलाई यो थाहा नहुन सक्छ, आईफोनहरू कालो बजारमा अत्यन्त इच्छित वस्तु हो र ती हुन् चोरहरूको लागि प्राथमिकता लक्ष्य। विश्वका प्रमुख शहरहरूमा चोरीको लगभग 40० प्रतिशतले मोबाइल उपकरणहरू समावेश गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» आईफोनको साथ खराब बानी
यससँग हातैले हिँडेर र ब्लुटुथ खुलामा बाहेक, म ती सबै "खराब बानीहरू" मा पर्दछु।
यद्यपि मैले बैटरी प्रदर्शन वा अन्य कमिहरुमा कुनै गिरावट पाएको छैन। न त मैले कहिल्यै कभर गरी सकेको छु, सधैं मेरो झोलाको पकेटमा।
र आईफोन now अब आफ्नो चौथो वर्षमा छ, जुन ग्यालेक्सी प्रयोगकर्ताहरू भन्न सक्षम छैनन।
मेरो परिवारमा ग्यालक्सी एसको साथ are छन् र ती सबै नष्ट भइरहेका छन्, जे भए पनि केसहरूमा उनीहरूलाई बोके। ब्याट्रीले ती मध्ये दुई परिवर्तन गर्नुपर्‍यो।
Sifon लाई जवाफ दिनुहोस्
आधुनिक ब्याट्रीहरूमा मेमोरी प्रभाव हुँदैन, त्यसैले तिनीहरू पूर्ण रूपमा डिस्चार्ज हुदैन। अब लिथियम प्रयोग गरिएको छ, निकेल क्याडमियम पछाडि छोडियो ...
यसलाई एक पटक चार्जमा प्लग नगरी छोड्ने सन्दर्भमा, चार्जरले यो चार्ज हुँदाको पहिचान गर्नुपर्दछ र विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नुपर्दछ। लिथियम ब्याट्रीहरूमा यो आवश्यक छ किनकि ओभर चार्जिंग (साथै न्यूनतम मूल्य भन्दा बाहिर डिस्चार्ज) खतरनाक छ।
प्रकाशक केबलको लागि निर्माताले पत्ता लगाउने कुरा फोनको रक्षा गर्न होइन, तर एप्पलको आम्दानीलाई बचाउन हो।
मैले भर्खर आईफोन पूर्ण रूपमा अनलोड गर्ने र यसलाई रातभर त्यस्तै छोड्ने ब्यवस्थापन गरे जुन अर्को दिनमा पूर्ण चार्जमा राखियो र फरक यो कसरी देखियो त्यसले देख्न सकीन्छ, सायद यो ब्याट्री क्यालिब्रेसन मात्र एक प्रकारको सिंक्रोनाइजेसन हो र ब्याट्री प्रतिशत देखाउँदछ कि वास्तविक एक हो तर यो काम गर्दछ किनभने आईओएस त्यस प्रतिशतमा आधारित छ फोनको केहि सुविधाहरू जस्तै चमकलाई सीमित गर्न।
यो विषयको साथ धेरै गर्न सक्दैन तर यूभी प्रकाश ब्याक्टेरियाको कीटाणुरहित र हटाउन सक्षम छ। यसको एकमात्र समस्या सम्बन्धित खतरनाक हो किनकि कुन स्पेक्ट्रमको आधारमा हामीले यसको प्रयोग गर्दा क्यान्सर हुन सक्छ।
वाई-फाई स्वचालित रूपमा केहि मिनेट पछि विच्छेदन हुन्छ जब यो सुत्न जान्छ, यो बन्द गर्न आवश्यक छैन। र ब्याट्री, चार्जर र केबल जेसी द्वारा उत्तर दिइसक्यो।
अत्यधिक तापक्रमको रूपमा, आईफोनसँग तापमान सेन्सरहरू हुन्छन् त्यस्ता समस्याहरू जोगिन र आवश्यक भएमा स्वत: बन्द हुन्छ।
र रोजाले टिप्पणी गरेको कुरा पूरा गर्दा, कपाल र कम्बिजको ​​कीटाणुरहित गर्नका लागि केश कात्रामा युभी प्रकाशको प्रयोग अनौठो हुँदैन; त्यसोभए सम्पादकको श doubts्का लाग्दछ कि यो "बिट" देखिन्छ ... राम्रो छ, यसलाई त्यहा छोडौं।
आउनुहोस् हामी लेखकले केहि प्रकाशित गर्नु भन्दा कम्तिमा थोरै अनुसन्धान गर्छौं कि उसका सबै लेखहरू मैला नै छन्।
रेयलाई जवाफ दिनुहोस्
सबैभन्दा नराम्रो लेख ... तपाईले एउटा दिनुभएन, चरम तापक्रम बाहेक, एउटा होइन!
न त यो लेखकलाई दोष दिनको लागि हो ... म तपाईंलाई एक लेख लेखेको र कहिल्यै असफल भएको देख्न चाहान्छु ...
एलेक्स, केहि समस्या छैन र कम भने यदि तपाईको चार्जर मौलिक छ भने ... केबल सबै पछि केबल हो। आजसम्म, मलाई थाहा छ, एप्पलले विद्युतीय चालकताको सम्बन्धमा कुनै नयाँ कुराको आविष्कार गरेको छैन ... यसलाई सजिलो चार्ज गर्नुहोस्
सम्पादकको बारेमा: थोरै कट्टरपन्थी र बढी नम्रताले चोट पुर्‍याउँदैन। यो एक चीज हो जुन तपाइँलाई ब्रान्डको उत्पादनहरू मनपर्दछ, अर्को जुन तपाइँ यसलाई श्रद्धेय मान्नुहुन्छ जस्तो कि यो एउटा सम्प्रदाय हो
म यो दिन स्की गर्दै छु, र धेरै पटक उप-शून्य तापक्रम, र यो सत्य हो कि मैले ब्याट्री नाली याद गरेको छु। यो %०% थियो र अचानक यो down०% सम्म तल जान्छ र त्यसपछि यो बन्द हुन्छ, र केही समय पछि (१ or वा २० मिनेट) सम्म म यसलाई फेरि खोल्न सक्दिन।
Albarrios लाई जवाफ दिनुहोस्
Alonso kyoyama भन्यो
चार्ज चक्रको बारेमा धेरै मिथकहरू छन्, सत्य यो हो कि ब्याट्रीहरूमा १००% प्रमाणित तथ्यहरू हुँदैनन्। केवल राम्रो अभ्यासहरू, जहाँसम्म लिथियम ब्याट्रीहरू क्यालिब्रेट गरिनु पर्छ (र वास्तवमा यो क्र्यापल पोर्टलमा देखा पर्दछ), यसलाई रातभर जोडिएको छोड्ने बारेमा र के अधिक चार्ज हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन, ब्याट्रीहरूसँग यसबाट बच्नको लागि सेन्सर हुन्छ, कहिले हुन्छ १००% चार्ज गरिएको ब्याट्री चार्ज हुनबाट रोक्दछ र उपकरण मात्र राख्न शक्ति प्रदान गर्दछ, वास्तवमा ब्याट्रीमा चिप छ जुन ब्याट्रीले अतिभारित गरेको छ भने रेजिष्टर गर्दछ (यो हार्ड ड्राइभमा स्मार्ट चिप जस्तै छ) र तपाईं त्यो देख्न सक्नुहुन्छ BatteryDoctor चिह्नको साथ डाटा यदि तपाइँ JB गरेको छ।
यो अधिक उत्सुक छ कि $ 500 को फोनमा मध्यम ब्याट्री प्रदर्शन छ।
AlonsoKyoyama लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, हामीले यो ब्याट्री सवाल अर्को पोष्टमा छलफल गर्‍यौं। मेरो अनुभव SINCE आईओएस installing स्थापना गर्दै मेरो आईफोनको ब्याट्री बन्द हुन्छ जब यो%% र १०% चार्ज हुन्छ। तिनीहरूले मजाक गरे, बकबक कुरा गर्नबाट रोक्न र मेरो ब्याट्री क्यालिब्रेट गर्न। मैले यो पहिले नै क्यालिब्रेट गरिसकेको थिएँ तर हामी हेर्ने छौं कि यो मेरो लागि कति लामो समय सम्म रहन्छ, यस साताको अन्तमा यसलाई क्यालिब्रेट गरे पछि।
यो मुद्दाको बारेमा दुखद कुरा, जस्तो कि एलोन्सोकोयामा धेरै राम्रो भन्छ, के यो is 600 को टर्मिनलको साथ हामी यस जस्तो हुनुपर्दछ। यसैले, फोनलाई अलार्म घडीको रूपमा प्रयोग नगरी यसलाई बन्द गर्नुपर्दछ। सज्जनहरू, यो कम्तीमा कसरी पुरानो टेलिफोनहरू बोकेको थियो र सँगै टेलिफोन बन्द गर्न अनुमति दिईएको छ र अलार्मको कारण छ कि जब यो खोल्न को लागी हो? जे भए पनि, धेरै हिसाबले म आईफोन मनपर्दछ, तर धेरै मा, र बढिमा, मँ एप्पलको डेलिभरीमा शंका गर्दछु। अभिवादन!
यो सत्य हो कि यो उत्सुक छ कि आईफोनसँग केवल only वा days दिनको ब्याट्री जीवन हुन्छ, तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन केसहरू थाहा हुँदैन जुन लामो समयसम्म रहन्छ। केसहरूमा जुन मलाई अन्य टर्मिनलहरू बारे थाहा छ, ब्याट्री १3वा १ hours घण्टा भन्दा बढि तिनीहरू मध्ये राम्रो हुँदैन।
म पहिलो बिन्दुसँग सहमत छैन, म मूलबाट आईफोनको प्रयोगकर्ता हुँ, with बर्ष पछि years बर्ष पछि, म विश्वस्त गर्न सक्छु फोन बन्द गर्नु ब्याट्रीको अनावश्यक फोहोर हो र यसले कार्य सम्पादन गर्दैन (I मूल ब्याट्री र मेदुरा २ दिन चुपचापसँग जारी राख्नुहोस्)। म तपाईलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि फोन खोल्नाले हवाइजहाज मोडमा राति छोड्नुभन्दा धेरै ब्याट्री खपत गर्दछ। यसलाई आफैंले प्रयास गर्नुहोस्।
Djrbn लाई जवाफ दिनुहोस्
M MFI (I) कम्प्याटिवल खेलहरू
Re कारण ठूलो स्क्रिन आईफोनaएक ठूलो व्यवसाय एप्पल हो